Aqoonkaab Waa maxay waji saliidka? | Aqoonkaab
Wajiga saliida leh dad badan ayaa ka sheegta, khaasatan markii qofku wajiga ku yeesho findoob ama haaro.
Eebe wuxuu oogada bini aadanka ku abuuray qanjidho howshoodu ay tahay inay soo daayaan saliid si ay u subkaan maqaarka sare, loogana hortago kor qallaylka.
Qanjidhadaas oo loo yaqaano “Sebaceous glands”, saliida ay soo saaraana waxaa loo yaqaanaa “Sebum”, hadii qanjidhadaasi si saa’id ah u shaqeeyaan qofka wuxuu yeesha maqaar saliiddu ku badan tahay khaas ahaan wajiga.
Maxaa keena Waji Saliidka?
Dhaxal: dadka ugu badan waxay arrintaan ugu dhacdaa dhaxal ahaan, kuwaasoo ku dhasho qanjidh saliid firfircoon.
Welwelka: wuxuu kiciyaa qanjidhada saliida.
Isbadallada hormoonka: waxay keentaa in saliid soo saarista qanjidhada ay badato ama wajiga ay ka soo yaacaan finan, waxaana xaaladaan la dareemaa xilliga caadada, kadibna way baaba’daa.
Dhibaatada ugu badan waa in wajiga uu yeesho nabro ama haaro kuwaas oo si dhakhso ah u faafi karo,
Jooji waji dhaqista badan: tan waa qaladka ugu horreeya ee lagu dhaco, dadku waxay aaminsan yihin hadduu qofka uu wajiga maydho in badan in saliiddu ay yaraanayso, waa caksi, saliidda waa sii badataan, marka waxaa wajigaaga maydhaa labo jeer kaliya, markaa soo kacdid iyo markaa seexanayso, taasoo dareensiinayso qanjidhka saliidda in baahi wayn aysan jirin.
Ku maydh wajigaaga biyo diirran: qaladka labaad waa in wajigaaga aad ku maydhaa biyo kulul ama qabow, taasoo labadoodaba wajiga qallajiya, hadduu qalleel yimaadana saliidu waa imaanaysaa.
Cabitaanka badso: cabitaanka badan waxuu jirka ka ilaaliyaa qallaylka, wuxuuna hoos u dhigaa shaqada qanjirrada saliidda soo saaro, ogow haddii biyo cabitaankaagu uu yar yahay, saliida way jiraysaa. Akhriso faa’idooyinka caafimaad ee laga dhaxlo biyo cabista badan:
Previous PostFaaidooyinka Tirada Badan Ee Cabbista Caanaha Hurdada Ka Hor Next PostSababaha Ay Gabadhu Caafimaad Ahaan Ugu Baahan Tahay Saacado Hurdo Oo Ka Badan Kuwa Uu Ninku Seexdo